परम्परा Archives - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
यो दुनियामा यस्ता भाग्यमानी मानव कंकाल पनि छन् जसले करोडौँ रकमका गहना लगाइरहेका छन् ! फोटोफिचर…
गहना लगाउनु मानिसको शौखको विषय हुनसक्छ । तर गरगहना, धनपैसा भन्ने कुरा ज्यूँदो हुन्जेलमात्र त हो । जति गहना र धनपैसा भएपनि मर्दा सँगै लग्ने होइन भन्ने उखानै छ । तर यो दुनियामा यस्ता...
जहाँ बिबाह गर्नु पहिले बलात्कार गरिन्छ, जसलाई घरकाले पनि साथ दिन्छन् र बिबाहको लागि बाध्य पारिन्छ !
यस्तो अचम्मको परम्परा जसको बारेमा जानकारी लिएर तपाइँ अचम्ममा पर्न्नु हुन्छ । यो परम्परा किर्गिस्तानमा छ, जसलाई ‘अला कचु’ को नामले चिनिन्छ । यहाँ युवकले आफ्नो रोजाईको जुनसुकै युवतीलाई अपहरण गर्छ र घर ल्याएर...
अनौठो परम्परा जहाँ, मृतकको आत्माले शान्ति पाउने जनविश्वासले महिलाको औँला काटिदिन्छन् ! (फोटो फिचर)
[wp_ad_camp_2] दुनियामा यस्ता केही आदिवासीहरु छन् जसका परम्परा तथा रितिरिवाजका बारेेमा सुन्दैमा हैरान भइन्छ । विश्व मानव समुदाय अत्याधुनिक युगमा प्रवेश गरिसक्दा पनि ती आदिवासीहरु अझै पूरानो युगमा बाँचिरहेका छन् र आफ्नै प्रथा र...
संसारका फरक – फरक धर्म तथा समुदायहरुमा मान्छे मरेपछि गरिने बिचित्रका परम्पराहरु
जब कुनै मानिस मर्छ तव उसलाई गरिने अन्तिम संस्कार बिधि धर्म तथा बिभिन्न मान्यता अनुसार फरक-फरक हुने गर्छ । मुख्यत: संसारभर मृत्यु पछी शरीरलाई खतम गर्ने मुख्यत: दुइ तरिका छन् । पहिलो गाड्ने काम,...
यो कस्तो परम्परा ? जहाँका महिलाहरु आफूलाई कुरूप देखाउन कै लागि ‘शृंगार’ गर्छन् !!!
संसारभरिका महिलाहरूको एउटा समान गुण हुन्छ । आफ्नो सुन्दरता निखार्न शृंगार । तर, अरुणाञ्चल प्रदेशमा यस्तो जाति छ, जहाँका महिला आफूलाई कुरूप देखाउन ‘शृंगार’ गर्छन् । अरुणाञ्चल प्रदेशको सुबनसिरी जिल्लाको दक्षिण भागमा अपातानी नामका...
एउटै जीवनसाथीको परम्परा किन ?
[wp_ad_camp_3] [wp_ad_camp_5] के तपाईलाई थाहा छ ? एउटै जीवनसाथीको परम्परा कसरी चल्यो ? हाम्रो समाजमा विवाह गरेपछि उ सँगै नै जीन्दगी विताउनुपर्ने पराम्परा कसरी चल्यो होला यसो विचार गर्नुस त । यो कहिलेदेखि चलेको...